Tigree Oo Qabsaday Magaaloyin Xilli Ay Socoto Doorashooyinka Itoobiya – Goobjoog News
TOPSHOT - People walk next to an abandoned tank belonging to Tigrayan forces south of the town of Mehoni, Ethiopia, on December 11, 2020. The town of Mehoni, located in Southern Tigray, experienced shelling resulting in civilian deaths and injured people. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo by EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)
Wararka ka imaanaya gobalka Tigree ayaa sheegaya in halkaasi ay ka qarxeen dagaalo u dhaxeeya Jabhaadda TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya.
Ciidamada difaaca Tigreega ee magacabooda looso gaabiyo TDF ayaa sheegay in ay la wareegen magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobalka kadib dagaal ay la galeen ciidamada Dowladda.
Dagaalka ayaana la sheegay in uu ahaa mid culus kadib markii November sanadkii tagay dowladda Itoobiya ay sheegtay in ay ka adkaatay kooxda TPLF.
Wararka ka soo baxaya gobalka Tigree ayaa sheegaya in weli laga cabsi qabo in magaalooyinka qaar ay ka dhacaan dagaalo u dhaxeeya dowladda iyo TPLF.
Afhayeenka Jabhadda Gebre GebreTsadiq ayaa sheegay in ay TDF ay bilaabeen in ay qaadan weeraro joogta ah oo ay ku qabsanayaan deeganada qaar.
“Intii ay dawlada Itoobiya ku mashquulsanayd doorashooyinka qaranka iyo arrimaha GERD [biyo xireenka weyn ee itoobiya dhisanayso], argagixisada TPLF [oo qayb muhiim ah oo ka tirsan TDF], kuwaas oo ay weheliyaan dhalinyaro ay dhawaan qorteen, waxay si firfircoon uga qayb qaateen howlo argagixiso,” ayuu yiri.
Dalka Itoobiya ayaa hadda waxaa ka socda doorashooyinka Baarlamaanka iyo deegaanka, xilli gobalka Soomaalida iyo Gobalka Tigreega aysan ka qeyb galeynin